अदालतबाट निस्किएर अदालतमाथि नै प्रहार ! | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
अदालतबाहिरैबाट अदालत चलाउन खोज्ने, आफूअनकूल नभए न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नै परिवर्तन गर्न लागिपर्ने उनको स्वभाव देखिएको छ ।
२०७८ आश्विन २६, मंगलवार १३:४२:००
काठमाडौँ । जसको जिन्दगी अदालतमा बित्यो । जसलाई अदालतले नै पहिचान दियो । अनि अहिले त्यही अदालतमाथि आक्रमण । केही व्यक्तिको विगत र वर्तमान हेर्दा यस्तै देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ आफूलाई सबैभन्दा स्वच्छ छविको ठान्छन् । आफूले जति अरु कसैले जानेको छैन भन्ने उनको घमण्ड छ । अनि आफूबाहेक सबै भ्रष्ट, अनैतिक र अज्ञानी भन्ने उनको सोच छ । त्यसैले त कुनै मुद्दा कुनै न्यायाधीश वा इजलासविशेषमा पर्यो कि परेन भन्ने चिन्ताले हरेक दिन सताइरहन्छ उनलाई । कुनै मुद्दा अदालतमा पुग्न पाएको हुँदैन, फैसला गर्न अघि सरिहाल्छन् । आफूले गरेको फैसलाले मात्र नपुग्ने भए अरु पनि केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशको झुण्ड तयार गरेर हस्ताक्षर गर्न लगाउँछन् ।
अदालतबाहिरैबाट अदालत चलाउन खोज्ने, आफूअनकूल नभए न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नै परिवर्तन गर्न लागिपर्ने उनको स्वभाव देखिएको छ । यतिखेर उनको सम्पूर्ण बल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सकेसम्म बदनाम बनाउनमा केन्द्रित देखिएको छ । राणालाई जतिसक्दो बदनाम गर्न सक्यो, उति नै आफ्नो प्रभाव अदालतमा बढ्ने उनले देखेको हुनुपर्छ । त्यसैले उनले राणाविरुद्ध विषवमन गर्दै राजीनामा समेत माग्न भ्याएका छन् । यसका निम्ति टेलिभिजनका स्टुडियोहरुमा उनी आफै कुदिरहेका छन् ।
यति मात्र होइन, अदालतमा राणाविरुद्ध अरु न्यायाधीशलाई उचाल्न दैनिक भेला र बैठक पनि गरिरहेका छन् । राणालाई सकेसम्म संवैधानिक इजलासमा अल्पमतमा पार्ने, त्यो नभए फुलकोर्टमै उनका विरुद्धमा आवाज उठाउन लगाउने गरी केही न्यायाधीश तयार पार्ने कोसिस श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । राणाविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेसम्मको तयारी श्रेष्ठले अगाडि बढाएको विभिन्न स्रोतहरुले बताएका छन् ।
जुन खालमा खायो, त्यही थालमा चुठ्यो भनेझैँ आफ्नै जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बितेको संस्थालाई कमजोर, बदनाम र विश्वासहीन प्रमाणित गर्न श्रेष्ठ किन लागिपरहेका छन् ? कुन शक्तिको इशारामा उनी चलिरहेका छन् ? अहिले गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । अदालतभित्र र बाहिरबाट दबाब सिर्जना गरेर प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउन सकिने उनले ठानेका होलान् । तर, यो सहज र स्वाभाविक दुवै छैन ।
अदालतभित्र रडाको पैदा गर्न सकिएला । केही समय चियाको कपमा तुफान सिर्जना पनि गर्न सकिएला । तर, वर्तमान नेतृत्वलाई पदबाटै अपदस्थ गर्ने तागत कम्तीमा श्रेष्ठसँग छैन । किनभने, अरुको नैतिकता र निष्ठामा प्रश्न उठाउनुअघि स्वयं आफू नैतिक र निष्ठावान् हुनुपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा धनी न्यायाधीशमा पर्ने श्रेष्ठले अहिले आफूसँग भएको सम्पत्ति के बागलुङको दुर्गम पहाडी क्षेत्रबाट बोकेर ल्याएका थिए ? त्यसको स्रोत के हो ? के उनले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा निर्विवाद थिए उनी ? के उनका गरेका फैसला र आदेश सबै विवादमुक्त छन् ? कतिपय काम गर्दै जाँदा बाहिर उत्पन्न हुने प्रतिक्रियाका आधारमा ठीक र बेठीक ठहरिन्छन् । कतिपय स्वार्थ समूहको अनुकूल नहुँदा पनि विवादित बन्न पुग्छन् । मूल सवाल व्यक्तिले इमानदारितापूर्वक निसाफ गरेको छ कि छैन भन्ने हो । आफ्नो पद र संस्थालाई घात गरेको छ कि छैन भन्ने हो ।
सपना मल्ल प्रधानहरुलाई नियुक्त गर्दा श्रेष्ठले राजनीतिक दल र अरु शक्तिकेन्द्रसँग लेनेदन गरे कि गरेनन् ? यदि राणा जन्मजातै खराब थिए भने उनी आफू प्रधानन्यायाधीश छँदा उनीमाथि कारवाही किन गरेनन् ? अहिले आएर राणाविरुद्ध हात धोएर लाग्नुपर्ने कारण के हो ? यी प्रश्नको जवाफ श्रेष्ठले दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा, राज्यको एक संवेदनशील अंगलाई गिँजोलेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने दाउबाट तत्काल पछि हट्नुपर्छ । होइन भने उनी स्वयंलाई यो प्रयास आत्मघाती बन्न सक्नेछ ।